Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Ny mpanamory fiaramanidina mpitondra fiaramanidina China Airlines 747 dia natory tamin'ny sidina nahatratra 35,000 metatra
Ny mpanamory fiaramanidina sinoa an'i China Airlines dia natolotry ny mpiara-miasa aminy natory tamin'ny fanaraha-mason'ny fiaramanidina mpitatitra olona 747 tao amin'ny sary kely somary nampihoron-koditra. Ireo izay matahotra ny hisidina dia tokony hibanjina ny masony ankehitriny, satria ilay horonantsary, niseho tamin'ny alarobia, dia mampiseho mpanamory iray natory teny amin'ny fiaramanidina antenantenanina, voalaza fa voafehin'ny 747 iray.
Sady tsy ara-dalàna no mampidi-doza ny fatin'ny mpanamory fiaramanidina mandritra ny fiaramanidina raha toa ka misidina an-habakabaka ny fiaramanidina ary, araka ny lalàna mifehy, tokony namoha ny komandany ilay mpanamory fiaramanidina fa tsy naka sary azy hoe manao snooze.
Ilay mpanamory fiaramanidina voatonona dia notondroina ho tsy iza fa i Weng Jiaqi, tompon'andraikitra ambony ao amin'ny China Airlines, mpitatitra nasionaly Taiwan, ary iray amin'ireo tompon'andraikitra voalohany amin'ny fiofanana ho an'ny 747 an'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka, nirehareha nandritra ny 20 taona.
“Tsy mahagaga raha tsy azo ihodivirana ny havizanana, fa amin'ny maha tompon'andraikitra ambony anao dia tokony hanome ohatra ianao. Faharoa, raha tena reraka loatra ianao, raha ny tena izy, afaka miteny amin'ireo mpiasan'ny ekipa miaraka aminao ianao mba hijery ny toe-pahasalamanao, ”hoy ny mpanamory fiaramanidina China Airlines tsy fantatra anarana tamin'ny EBC News.
“Fantany fa diso izy, ka nangataka fampitandremana izy. Tsy dia matotra izany. Ka rehefa nitantana ny fanadinana simulator taty aoriana izy dia tsy nahomby olona betsaka. Angamba te hamaly faty izy satria tsy fantany izay nitory azy. ”
Voalazan'ny manam-pahefana fa mandoa onitra ny China Airlines, raha ny mpanamory fiaramanidina natory sy ilay mpanamory fiaramanidina naka sary azy kosa dia samy notenenina mafy.
Nivoaka an-tserasera ny horonantsary dimy andro taorian'ny fitokonana nataon'ny mpanamory fiaramanidina China Airlines 600 mahery, izay nanohitra ny fiasan'ny mpiasa sy ny havizanana vokatry ny tsy fahombiazan'ny asa teo amin'ny seranam-piaramanidina, na dia voalaza fa nitranga talohan'ny fitokonana aza izany.
Nisy horohoron-tany lehibe tany amin'ny faritry ny sisin-tanin'i Ekoatera